Mpanakanto Rolf « Fay tanteraka aho, anatra ho antsika iny »
Niala tsiny tamin’ny vondron’olona, olon-tsotra, haino aman-jery, andrim-panjakana, fivavahana,…
Fitsaboana nentim-paharazana Misandrahaka manerana ny nosy FITRAMA
Taorian’ny nisitahan-dRakotondranaivo Jean Pierre dia nivondrona nanambatra heriny tanteraka ireo Mpitsabo nentim-paharazana eo anivon’ny orinasa FITRAMA manerana ny Nosy, tantanan-dRafanomezantsoa Jean Nirina.
Asa tanana Malagasy Vahiny sy Malagasy any an-dafy no tena liana
Tsy dia nisy ny tsena teo amin’ny tontolon’ny asa tanana nandritr’iatra sy mpivarotra asa tanana Malagasy vita amin’ny hodi-biby iray etsy Antsahazay fihibohana izay raha ny fanadihadiana natao taminampamokvola
Chandoutis Raoera “Fotoana hampiharana ny soatoavina izao ”
Aretim-be ny Coronavirus ary ny soatoavina Malagasy dia mametraka fa voalohan-karena ny fahasalamana, hoy ny mpampianatra mpikaroka momba ny politika, Chandoutis Raoera.
Fanajana fepetra Mbola voarara ny famadihana
Ao anatin`ny vanim-potoanan` ny famadihana izao isika eto Madagasikara. Sarobidy loatra ho an` ny Malgasy izay mbola mandalina izany noho izy fomban-drazana.
Mpamokatra horonantsary Malagasy Lasa hihazakazahan’ny mpanambady
Somary henjakenjana toy ny nahazo ny olon-drehetra koa ny nahazo anay mpisehatra eo anivon’ny famokarana horonantsary malagasy, hoy ny mpamokatra, Keylash Youme.
ka mandritra ny 15 andro dia hofoanana ireo fotoam-pivavahana sy karazam-pivoriana rehetra ao anivon' ny fiangonana. mandritra io fe-potoana io. Saika nitovy avokoa ireo fanambarana satria miantso fitoniana sy fiombom-po tanteraka ao anatin'ny firaisan-kina eo am-piatrehana izao fitsapana lehibe izao ary manamafy ny tokony hanarahan'ny rehetra amin'ny antsipiriany ireo fepetra rehetra atoron'ny tompon'andraikitra isan’ambaratonga. Etsy ankilany, mbola nisy Fiangonana zandriny iray mitsofoka etsy Nanisana nanokana fotoam-pivavahana ka natsahatry ny Polisin'ny boriborintany fahatelo izany ary nasaina nody avokoa ireo olona mba hiarovana azy ireo amin'ilay valan'aretina "Covid 19." Anterin'ny Polisim-pirenena hatrany fa mba ho fiarovana ny aina sy ho fitsinjovana ny mpiara-belona dia ilaina ny manaraka ny toromarika omen'ny tomponandraikitra hahafahantsika rehetra misoroka ity valan'aretina ity.